Juan Eslava Galán. Kuongororwa kwayo nhoroondo nhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Eslava Galán, inozivikanwa uye inozivikanwa Jaen munyori wenhoroondo yenhoroondo, akaberekerwa muna Arjona zuva rakaita sezuva ra 1948. Zvebasa rakakura sekusiyana, maitiro ake epedyo uye inofadza nzira yekurondedzera rondedzero yezvakaitika kare, ngano uye isiri-ngano yakaita kuti ive rakakosha kupfuura gomba rakakosha pakati pemazita makuru yeiyo genre mune yayo inodzidzisa chikamu. Saka kupemberera zuva rekuzvarwa iri, ini ndinopa Ini ndinoongorora mamwe emazita avo mumiriri. Uye kuti vave vazhinji.
2 Zvimwe zvinoshanda
2.1 Yekutanga neyechipiri hondo yenyika yakataurira vanofungidzira
2.2 Iyo Russian Revolution yakaudza kune vanofungidzira
2.3 Madzimambo eKatorike
2.4 Mhuri yePrado
2.6 Nyaya yekutora chingwa nekunyorova
Chiremba weTsamba uye akasarudzika munhoroondo genre aine ake akaverenga uye akatevera zvinyorwa, Eslava Galán anozvikudza nekuve ne shanda zvakazara sekusiyana uko kwaakatamba masitayera uye nguva. Kubva prehistory kusvika nhasi uye uye, zveshuwa, kubata neese akakosha nguva muNhoroondo. Uye kuzviudza nenzira yaanoita hazvisi nyore. Uye kana kuzivisa kwacho kuchiperekedzwa ne yakajeka uye inonakidza maitiro Kunyanya kukosheswa. Asi Eslava Galán futi akanyora zvinyorwa zvekufungidzira pasina kusiya genre. Akasainawo zvimwe naye pseudonym rakanyorwa naNicholas Wilcox.
Sezvo paine akawanda mazita, ini ndinosarudza mamwe emamiririri.
Yekutanga neyechipiri hondo yenyika yakataurira vanofungidzira
Pamwe wevanonyanya kuzivikanwa uye nazvo «Kune vanokanganisa», yakajairwa tagline remazita avo. Kune vadikani uye mafeni enguva inonakidza uye inotyisa yenhoroondo yaive nehafu yekutanga yezana ramakore rechiXNUMX. A kutarisa kwakazara sekunyorwa, asi zvinoitwa zvakanyanya nyore kuverenga, pazvinhu zve makwikwi epasi rose, kubva kuzvikonzero kuburikidza nekushanduka mune zvombo kana mazano uye, zvechokwadi, kuratidza vatambi vayo vakuru. Uye ese ane madhoti ane anecdotes kwese kupi.
Iyo Russian Revolution yakaudza kune vanofungidzira
Izvi zvinoitikawo nemusoro uyu, uko muchimiro zvakare che nyaya inomhanya-mhanya sekubata kwekuseka, iri nezve zvese zvakatungamira kune kukunda yeRussian Revolution, chiitiko chakakosha munhoroondo yezvematongerwo enyika. Kuongororwa kweiyo mabviro evaRomanov, ndiani Rasputin kana kuti zvakaenda sei Karl Marx, Kupfuura nepakati penhamo yakatambudza varimi veRussia, kudzamara yasvika iyo Bolsheviks. Kunyanya nharaunda dzese dzekurangana, kurwisa uye nhoroondo dzevakawanda vevamwe vanopokana.
Sei usinga bata maviri eakanyanya kukosha mavara munhoroondo yenyika yedu? Isabel I weCastile naFerdinand II weAragon vakaisa matombo ekutanga e hwaro hweSpain yemazuva ano, nheyo dzeumambo hweramangwana. Asi paivewo nemimvuri pakati pemarambi.
Zita rekurangarira maererano ne Makore mazana maviri ePrado Museum iyo yakaitwa gore rapfuura. Pane ino nguva, Eslava Galán anotikoka kuti titore nzvimbo yemuseum iri kuronga Mhuri album. Saka anomira pane yega furemu kuti tizvizivise kumunhu wega wega anoratidzwa, kubva kumadzimambo kusvika kune vanokudzwa kana vanhuwo zvavo. Uye anotiudzawo nezve izvo zvaive kuseri kweumwe kana mumwe mufananidzo, avo anecdotes kana zvakavanzika zvavanochengeta.
Eslava Galán zvakare ane muunganidzwa wemabhuku akatsaurirwa Iwo makuru matadzo enhoroondo yeSpain, kwaunounganidza chokwadi chekuziva nezvavo. Iyi ndiyo yaive iyo yechipiri vhoriyamu, iyo inobata nemakaro kuburikidza nezvikamu zvezvakaitika kubvira nyaya dzevakakurumbira makororo kubva muzana ramakore rechiXNUMX kusvika kubasa revasungwa vezvematongerwo enyika mu Mupata wewawa. Uye kunyange vatambi vakaita saiye Dioni uye kurwisa kwake kunoshamisa.
Nyaya yekutora chingwa nekunyorova
Uye maitiro ekusiya iyo kudya munhoroondo yeSpain? Mune zita iri, Eslava Galán anozviongorora kuburikidza kicheni chenyu nezvibatiso, kubva kumadzitateguru edu vanhu vanodya vanhu kubva kuAtapuerca, ichipfuura romans nemabiko avo kana mahwendefa nechikafu vakauya nacho Muslim kana vaJudha. Uye haakanganwe zvakabva kuNyika Itsva. Zvese zvinoperekedzwa nematanho uye akawanda anecdotes yevakawanda motley mavara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Juan Eslava Galán. Kuongororwa kwemabhuku ake enhoroondo uye enganonyorwa
Ini ndainyanya kufarira novel rake "Señorita", rakanyatso nyorwa uye rinonakidza. Ndatenda
Balcony munguva yechando naLuis Landero